Venezoela: Fijery sy fisainana mikasika ny fandrindràna ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Desambra 2010 16:58 GMT
Androany (14 Desambra), ny Antenimieram-pirenena Venezoeliana dia hiady hevitra mikasika ny fanavaozana ny rafi-pirenena momba ny fifandraisan-davitra, tafiditra anatin'izany ny fametrahana Toeram-Pidirana amin'ny Tambajotra, ny fanaraha-maso ny vontoaty rehetra ifampizaràna eo anaty aterineto, ary ny fandraràna sasantsasany amin'ny karazana vontoaty (filàna ara-nofo, herisetra, ary ireo “maneho fitondrantena tsy mendrika”). Raha manhgina tsy andrenesam-peo ireo mpanao politika Venezoeliana, dia naneho ny heviny kosa ireo mponin'ny aterineto mikasika ny fahitan-dry zareo an'ity volavolan-dalàna ity.
Ilay mpampiasa Frick [es] dia niteny tao amin'ny bilaoginy hoe:
Ny tohan-kevitra momba ny maha-feo “marina” na “ilaina” mba hanamarihana ny hoe iza no mendrika hanana na tsia ny zo halalaka miteny, dia tsy manamarina velively ny fanivànana sady, averina indray, tsy anjaran'ny fanjakana ny mandray fepetra ara-moraly eo amin'ny toerako.
Lubrio (Luigino Bracci Roa), izay misora-tena ho mpanohana matanjaka ny Filoha Chavez, dia nanakiana ny amin'ny tokony hampiharana io lalàna io koa amin'ireo mpampiasa aterineto mpomba ny governemanta [es]:
Mety hieritreritra ny sasany fa mihoatra ny vala aho raha milaza fa io tolo-dalàna io dia mety ho ampiasaina hanivànana ny pejin'ny fivoarana revolisionera. Ny olana dia ny amin'ireo sampana sasany ao anaty fanjakana, ao anatin'ny ezaka ataony ho “marina” sy tsy azo kianina, tonga hatrany amin'ny fampihàrana sazy amin'ny “andaniny roa” rehefa nampiharina izy ireny. Ohatra, tsy dia hahagaga ahy amin'ny hoavy raha mandray fanapahan-kevitra ny Conatel ka hanakana ny Noticiero Digital, saingy mba “hisehoany ho marina / tsy mitanila” dia manapa-kevitra koa izy hanao toy izany amin'ny “The Hojilla” noho ny tsy fanajany ny Ben'ny tanàna Carlos Ocariz.
EnigmasPress [es] milaza fa tsy mahalala ny fomba fiasan'ny aterineto ny manam-pahefana ao amin'ny governemanta:
Ireo olona nampiandraiketina ny fanavaozana – ny Lalàna “Resorte”- ny Sivana – ny Fanarahamaso – ny Aterineto ao Venezoela dia tsy mahalala mihitsy ny tantara lavaben'ny fifandraisana ara-elektronika. Tsy fantatr'izy ireo ny lova apetraky ny cyberpunk. Ireo hetsiky ny aterneto manerantany ary ny filaozofia sy ny vontoatin'ny Zeitgeist sy ny Pathos eo amin'ny tontolo dizitaly.
Amin'ny lafiny iray, nanoratra i LuisCarlos Díaz [es] mikasika ny tsy fahafaha-mampihatra ilay lalàna, ny fahadisoan-toerany sy ny tsy fahampian'ny maha-mitombina azy io:
Ny fanavaozana ny Lalàna Resorte, ka miaraka aminy ny Aterineto, dia mikendry ny hametraka fefy eo amin'ny sehatra ary hanome hery ny governemanta amin'ny fifehezana, fanaraha-maso ary fanasaziana ataony izay avy hatrany dia hametraka antsika any amin'ny faran'ny lisitra eto amin'ny tanibe raha resaka fahalalahan'ireo mpampiasa aterineto. Ho sarotra hazavaina amin'ny vahiny izany miohatra amin'ny Cadivi (Kaomisiona miadidy ny fitantanana ny fanakalozam-bola) , saingy ireo mpanao lalàntsika dia mino fa ny Aterineto dia “fantsona” iray manana lamim-pandaharana sy faritany. Mino koa ry zareo fa ny Aterineto dia habaka iray handrantoana ireo “fahaiza-miaina.” Mino ry zareo fa ireo mpanome tolotra Aterineto no manely ny vontoaty, ka dia omen-dry zareo sazy rehefa tsy mahavita mifehy an'izany, izay endrika iray enti-manilika ny maha-tomponandraikitry ny sivana.